G FATT အသံ အတိုင်းတုပပြီး သီချင်းဆိုပြ ခဲ့ တဲ့ နေတိုး ရဲ့ စွမ်းရည် ကိုချီးကျူး ခဲ့ တဲ့ စိုင်းစိုင်းနဲ့ G FATTရဲ့ဗီဒီယို… – Let Pan Daily
G FATT အသံ အတိုင်းတုပပြီး သီချင်းဆိုပြ ခဲ့ တဲ့ နေတိုး ရဲ့ စွမ်းရည် ကိုချီးကျူး ခဲ့ တဲ့ စိုင်းစိုင်းနဲ့ G FATTရဲ့ဗီဒီယို…
အနုပညာလောကရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ နေတိုးနဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်စီ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။… နေတိုးကလည်း ရုပ်ရှင်လောကမှာ အကယ်ဒမီဆုတွေများစွာ ရရှိထားတဲ့ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်သလို စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကလည်း ဂီတလောက မှာ မှတ်တိုင်တွေများစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်၊ မင်းသားတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။… စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ နေတိုးတို့က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအချို့မှာ အတူတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွင်းကလည်း ကောင်းကင်မရှိတဲ့ကြယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ အတူတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။…
မနေ့က ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက်နေ့မှာတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ နေတိုးတို့က Samsung Galaxy S21 Series 5G Launch ပွဲကို အတူတူတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။… ထိုပွဲမှာ နေတိုးက သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုနဲ့ G Fatt အသံအတိုင်းတုပပြီး သီချင်းဆိုပြခဲ့တာကြောင့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က နေတိုးကို စနောက်ခဲ့ရတာကို အခုလိုမျိုးပဲ တွေ့ရပါတယ်။….
ပရိသတ်ကြီးအတွက် နေတိုးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ နေတိုးရဲ့ အံ့သြလောက်စရာကောင်းတဲ့ အသံတုစွမ်းရည်ကြောင့် တော်တော်လေးသဘောကျခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။…. ပရိသတ်ကြီးလည်း နေတိုးရဲ့ အမိုက်စားစွမ်းရည်ကိုကြည့်ပြီး သဘောကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အႏုပညာေလာကရဲ႕ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ နာမည္ႀကီးသူေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေနတိုးနဲ႔ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုယ္စီ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။… ေနတိုးကလည္း ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာ အကယ္ဒမီဆုေတြမ်ားစြာ ရရွိထားတဲ့ မင္းသားတစ္လက္ျဖစ္သလို စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ကလည္း ဂီတေလာက မွာ မွတ္တိုင္ေတြမ်ားစြာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အဆိုေတာ္၊ မင္းသားတစ္လက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။… စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္နဲ႔ ေနတိုးတို႔က ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြအခ်ိဳ႕မွာ အတူတူတြဲဖက္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ေကာင္းကင္မရွိတဲ့ၾကယ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမွာ အတူတူတြဲဖက္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။…
မေန႔က ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔မွာေတာ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္နဲ႔ ေနတိုးတို႔က Samsung Galaxy S21 Series 5G Launch ပြဲကို အတူတူတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။… ထိုပြဲမွာ ေနတိုးက သူ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းတစ္ခုနဲ႔ G Fatt အသံအတိုင္းတုပၿပီး သီခ်င္းဆိုျပခဲ့တာေၾကာင့္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္က ေနတိုးကို စေနာက္ခဲ့ရတာကို အခုလိုမ်ိဳးပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။….
ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေနတိုးရဲ႕ ဗီဒီယိုေလးကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ကေတာ့ ေနတိုးရဲ႕ အံ့ၾသေလာက္စရာေကာင္းတဲ့ အသံတုစြမ္းရည္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးသေဘာက်ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။…. ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေနတိုးရဲ႕ အမိုက္စားစြမ္းရည္ကိုၾကည့္ၿပီး သေဘာက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းနေပြီး အသည်းယားစရာ ပုံစံလေးနဲ့ အမိုက်စားဆော့ ထားတဲ့ Mဆိုင်းလု ရဲ့ ဗီဒီယို
ကိုယ္ၾကပ္ဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ သူမရဲ႕ ျဖဴဝင္းဥၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိလြန္းတဲ့ အလန္းစား ပုံေလးေတြတင္လိုက္တဲ့ မိုးျမင့္သဇင္
ဖြူဖွေးဝင်းဥတဲ့ အသားအရေလေး နဲ့ ကဗျာ ဆန်ဆန်လေး လှနေတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
မိလွန်း တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ ကစ်ကစ် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူ အင်ဒိုနီးရှား သံရုံးရှေ့သို့သွားရောက်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှု မှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်
မြေနီကုန်း က Gen Z လေးတွေ ရဲ့ နောက်ထပ် လေးစား ဖွယ်ရာ အပြုအမှုလေး တစ်ခု